Izinkolelo zabantu ngesimo sezulu – iAfrika
Amadlozi Amakhambi Amakhaya Amalobolo Amasonto Imicimbi Imicimbi yesintu Imikhonto Imishado Impepho Izaga Izigodi Izihlangu Izikhali Izilwane Izimpahla zesintu Izinkanyezi Izinkolelo zesintu Izinkomo Izintelezi Izinyanga Izinyoni Izisho Shembe Ukubala Ukudla Ukudla kwesintu Ukugana Ukugeza Ukuhlanza Ukukhulelwa Ukulandwa Ukulobola uMabo uMembeso Umemulo Umhlonyane Umsamo Umshado Utshwala
Izinkolelo zabantu ngesimo sezulu
Abantu banezinkolelo eziningi ngezinto ezenzekayo nsuku zonke. Lokhu kungahlanganisa imfuyo nesimo sezulu. Leyo yimpilo yabantu, ngendlela yokuthi bazitshela nokuthi yonke into esemhlabeni iyakhuluma futhi uma uyinaka noma uyilandelela uyakwazi ukuthi uqonde lokho esuke ikuveza ngaleso sikhathi.
Kwakubalulekile kubantu bakudala ukuthi ngaphambi kokuthi bagobe izinkophe (balale), bame ngaphandle komuzi babheke esibhakabhakeni ukubheka ukuthi usuku olulandelayo luzobe lunjani. Njengokuthi nje uma kuzona izimvula bebebuka isimo esenzeka ezweni bese beyakwazi ukubona ukuthi lizona isikhathi esingakanani. Esinye isibonelo wukuthi uma belale kunomoya kakhulu bebazi ukuthi angeke abekhona amazolo ngosuku olulandelayo, nalowo ozothatha uhambo ekuseni ubelala esazi ukuthi ngeke aze abe nenkinga futhi ngeke ahambe ebhula amazolo ngenduku.
Unyezi noma inyanga: Bekusetshenziselwa kakhulu ukuhlukanisa izikhathi zonyaka. Bekubhekwa ukuthi kugcwele yini noma kuwucezu, lokho bekubenza bazi ukuthi yini abazoyitshala ngaleso sikhathi.
Ilanga: Belisetshenziswa ukuhlukanisa isikhathi sonyaka lokho kusukela ezingeni elibalele ngalo, bese-ke kwazeka ukuthi yisikhathi sokutshala noma yisikhathi sokuvuna. Ilanga belisetshenziswa futhi ukusho isikhathi mhlawumbe umuntu exoxela omunye ngesigameko esithile esenzeka ngasho, achaze isikhathi ngokuveza ukuthi ilanga belimi kuphi ngaleso sikhathi, njengokuthi nje bebesebenzisa ubude besithunzi. Ngeshumi nambili emini bebethi, isemini bebade. Phela uma isithunzi sisuke siside ngaleso sikhathi sithi asilingane naye umnikazi waso. Noma bachaze ngokuthi isithunzi besingemuva noma eceleni njalonjalo.
Ukuguqubala kwezulu: Babethi libafazi bedube inyama, besho lapho lisuke lingabalele futhi lingashisi, futhi lingani, liguqubele nje.
Izinkanyezi: Uma belale kunezinkanyezi eziningi esibhakabhakeni, lokho bekuyinkomba yokuthi kuzobalela kakhulu ngakusasa, imisebenzi yabo bazoyenza kahle njengokulima emasimini, nokwelapha. Uma kwenzekile babona inkanyezi entwizayo noma etshuzayo, leyo bebethi inkanyezi yenhlanhla. Bebebizana bacele noma yini abayifisayo bekholelwa ekuthini kuzokwenzeka lokho abasuke bekucelile. Ngemuva kokudlulisa isifiso enkanyezini, kwakufanele uma sebengenile endlini bakhuleke kuMvelinqangi ngezifiso abanazo.
Amafu: Ifu elimnyama belisho imvula ezayo, kuye ngokuthi likhulu kangakanani lelo lifu. Kokunye lelo fu kwakwenzeka kube nomoya kugcine kungananga, mhlawumbe kube neziphepho zodwa. Uma ifu limnyama futhi lihamba nesiphepho esikhulu bebethi lisuke lihamba nenyoka enkulu esuke iguqula isikhundla sayo noma isuke iphenduka isiziba.
Imvula: Uma kugcine ngokuna bebebona ngokuthi utswayi olucolisisakele lube manzi esitsheni kodwa lube lungathelwanga ngamanzi, lokhu bekukhombisa ukuthi imvula isazona isikhathi eside.
Tags Isimo sezulu, Izinkolelo ngesimo sezulu